norm and conformity | Zizawa's refuge
ဒီနေ့ ဟောပြောပွဲတခု သွားခဲ့တယ်။ ဟောပြောသူက ထိုင်းသမိုင်းပညာရှင်တွေထဲမှာ လောလောဆယ်နာမည်အကြီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရမယ့် ပါမောက္ခ Thongchai Winichakul။ သူပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်က Thailand: The State in Denial တဲ့။ အဓိကပြောသွားတဲ့ အကြောင်းက ဘုရင်၊ ဖိဖုရားနဲ့ ဘုရင်လောင်းလျာကို အသရေဖျက်တာ၊ ပုတ်ခတ်တာ၊ ခြိမ်းခြောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးယူလို့ရတဲ့Article 112 လို့ခေါ်တဲ့ ဥပဒေအကြောင်း။
သူအဓိကထားပြောသွားတာက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အဲဒီပုဒ်မတည်နေတာဟာ ဘုရင်ကိုသစ္စာရှိတဲ့ လူတန်းစားတစုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ civil society တခုလုံးကပူးပေါင်းပြီး အသံတိတ်နေလို့တဲ့။ norm လို့ခေါ်တဲ့ လူအများစုလက်ခံတာကိုပဲ ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အသိကြီးနဲ့ လူတိုင်းက အသံတိတ်ပူးပေါင်းပြီး ဒီဥပဒေကို သက်ဆိုးရှည်စေတယ်။ တခါအတိတ်မှာလဲ ၁၉၇၅ အောက်တိုဘာ ၆ရက်လူသတ်မှုကြီးကို လူထုကြီးက သြဘာပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူ၄၀ကျော်အသတ်ခံရတယ်။
တမာဆတ်ကကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြတာကို ဘယ်သူမှန်းအခုထိဖော်ထုတ်လို့မရတဲ့ (၁၉၇၆ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်က ကျောင်းသားတွေရော သတ်သူတွေကိုပါ ပါးစပ်ပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ တရားခံသိအုံးတော့။ အဲဒီလူကို တရားစွဲလို့မရတော့ဘူး။) အဲဒီကိစ္စမှာ လူ၅ယောက် လူအုပ်ရှေ့မှာ ကြိုးစင်တင်ခံရတယ်။ မိန်းကလေးတွေ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတယ်။ အဲဒါကို ဘေးမှာကြည့်နေတဲ့ လူထုက လက်ခုတ်လက်ဝါးတီးပြီး အားပေးကြတယ်။
ဒါဟာ၁၉၇၀နှောင်းက norm လား။ လူတွေက တကယ့်ကို လိုလိုလားလားလက်ခံခဲ့ကြတာလား။ ဒီနေရာမှာ norm ဆိုတာ reality အရှိတရားမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်စကားကို သူများနားထောင်ဖို့၊ ကိုယ့်လုပ်ရပ်က အများအမြင်မှာ မှန်တယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ လုပ်တာ။ reality ကတော့ တကယ့် ပကတိအဖြစ်မှန်။ ပါမောက္ခပေးတဲ့ ဥပမာနဲ့ရှင်းရရင် ထိုင်းမှာ ဘုန်းကြီးတွေဂစ်တာမတီးဘူးဆိုတာ norm။ တယယ့်အဖြစ်မှာ ဂစ်တာတီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ တခြားမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလဲရှိတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းဘုန်းကြီးတွေ ဂစ်တာတီးတာ သတင်းစာမှာပြလို့မရဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲထည့်မရိုက်ရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပုံရိပ်တွေဟာ အများလက်ခံတဲ့၊ အစိုးရကလက်ခံတဲ့ norm မဟုတ်လို့။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အချိန်ရရင် စာတပုဒ်လောက်အေးအေးရေးချင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အချိန်မရလို့ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ အခုလေးတင် မကေဘလော့က နောက်ဆုံးစာရယ် သူ့အောက်က ကွန်မန့်အချို့ရယ်ဖတ်ပြီး ဒီစာလေးကောက်ရေးဖြစ်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူတွေလို့ မမြင်ကြတာ ဗမာတွေ (ဗမာပြည်ထဲက၊ ဗမာပြည်ကလာသူတွေအားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်) ရဲ့ norm လား။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလဲ လက်မခံဘူး။ ဗမာပြည်ကလဲ လက်မခံဘူး။ တိုင်းပြည်ထဲမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေးရရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရေး၊ ကိုယ့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ့်အတွက် နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် ကာကွယ်ပေးဖို့၊ ရေဘေးဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး စတဲ့အရေးပေါင်းများစွာမှာ စေတနာလဲပါ တကယ်လဲလုပ်ကြတဲ့ လူတွေဟာ လူကို ရိုဟင်ဂျာဖြစ်လို့ လူအဖြစ်မမြင်နိုင်တာ norm လား။
Norm ရော reality ရော မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းတယ်။ ဟုတ်ရင်တော့ ငါတို့ပြောတာပဲအမှန်။ ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံပြောရအောင် ရှင်၊ မင်း၊ ခင်ဗျား ဗမာမဟုတ်လို့လားလို့ ပြောကြမှာ။ ဗမာဆိုရင် ဘာ၊ ဘာလုပ်မှ ဘာပြောမှ ဗမာဖြစ်မယ်လို့ ဒီ norm ကို ပကတိ အမှန်တရားဖြစ်အောင်ပြောနေကြသူတွေက ပြောနိုင်စရာရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် လူသားကို လူသားလိုကြည့်နိုင်ကြသူတွေ၊ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ကိုယ်ထုတ်ပြောနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိပြီး အဲဒီလိုထုတ်ပြောတာကိုလဲ ထောက်ခံတဲ့ သူတွေရှိနေတာကိုကြည့်ပြီး အခု facebook မှာတွေ့နေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် လူသားချင်းမစာနာတဲ့အမြင်ဟာ ဗမာတိုင်း ရဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောချင်တာပဲ။ အဲဒီလိုမမြင်လို့ ခင်ဗျားဗမာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဗမာဟုတ်၊ မဟုတ်ဘယ်သူက သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလဲဆိုတာနဲ့ လူသားချင်းမစာနာနိုင်တဲ့စိတ်ရှိမှဗမာလို့သတ်မှတ်မယ့် norm ပေါ်လာရင် အဲဒီပုံစံခွက်ထဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဝင်ခံမလား စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
« ဘုရားသခင္ ေသဆံုးျခင္း
အင်္ဂလိပ်က အင်္ဂလိပ်ကျင့် ကျင့်တော့ ဖားပြုတ်က မခံချိ မခံသာဖြစ် »
9 thoughts on “norm and conformity”
တကယ်ကျတော့ ဗမာလူမျိုးလို့ ခေါ်နေတဲ့ လူမျိုးကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံရပ်ခြားက လာခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ လုစတို့၊ ဆရာသန်းထွန်းတို့ thesis တွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလား။ တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရွှေ့လာပြီး ကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံလို့ ခေါ်တဲ့ နေရာမှာ အခြေချရာကနေ မြန်မာလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရယ် ဖြစ်လာတာပဲ။
ဖြစ်သင့်တာက အပြင်က ဝင်လာတဲ့လူတွေကို ဗမာလုပ်ပစ်နိုင်ဖို့ပဲ။ ဒီတော့ မေးစရာ ရှိတာက ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဲ့သလို လုပ်ဖို့ဆိုရင် ဗမာ၊ မြန်မာ ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ဆောင်လဲဆိုတာ အရင်ဆုံး သေချာ သတ်မှတ်ရတော့မယ်။ What does it mean to be Burmese? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေရတော့မယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ဗမာ၊ မြန်မာ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဗမာ၊ မြန်မာ ဟုတ်မဟုတ် ဘာနဲ့တိုင်းမလဲ။ အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်မှ ဗမာ၊ ငပိကြိုက်မှ ဗမာ၊ သင်္ကြန်ကို သဘောကျမှ၊ သင်္ကြန်မှာ ပျော်မှ ဗမာ စသဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ချက်တွေက ရုန်းမထွက်နိုင် သေးပါဘူး။
ဗမာလူမျိုးကို ရင့်ကျက်တဲ့ လူမျိုးအဖြစ် မြင်ချင်တယ်။ လူမျိုးကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှုနဲ့ ချိတ်ထားတာ (ဒီလို ပြောရတာ လိင်တူ စိတ်ဝင်စားသူတွေကို ငါအာဏာရရင် ဗမာပြည်မှာ မထားဘူးလို့ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ လူရှေ့ ထုတ်ပြောတာမျိုး တခါမက ကြားဖူးလို့ပဲ။) အသားအရောင်နဲ့ ချိတ်ထားတာ၊ ခြုံပြောရရင် မွေးကတည်းက ခွဲမရအောင် ပါလာတဲ့ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အချက် အလက်တွေ ဒါမှမဟုတ် သူများကို မထိခိုက်တဲ့ အထုံ၊ ဝါသနာ၊ ယုံကြည်မှု စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အခြေပြုပြီး ခွဲခြား သတ်မှတ်တာဟာ အန္တရယ် ရှိစေနိုင်တယ်။
ဗမာလူမျိုးကို လူသားတိုင်းကို လူသားလိုမြင်ပြီး ဆက်ဆံတဲ့၊ မရှိအတူ ရှိအတူပေါ့ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို တန်ဖိုးထား လေးစားတဲ့၊ သူများ မထိခိုက်ရင် ဘယ်ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုကိုမဆို လက်ခံခွင့်ပြုတဲ့၊ ခြုံပြောရရင် ရင်ခေါင်းကျယ်တဲ့ လူမျိုး အဖြစ်မြင်ချင်တယ်။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာလိုက်ပြီး၊ ပညာရှိမရှိ လိုက်ပြီး၊ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုကို လိုက်ပြီး၊ အသားအရောင်ကိုလိုက်ပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ လူမျိုးအဖြစ် မမြင်ချင်ပါ။
Posted by watote | 05/11/2011, 10:28
ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ လက္ရွိမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္စု ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံ ေနတာ မဟုတ္ဘဲ … ျမန္မာတိုင္းရင္းသားထဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ဖက္ကမ္းက ခိုး၀င္လာတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္စုပါ။
သူ႕ရဲ႕ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာနဲ႔ အသားအေရာင္ကို မခြဲျခားဘဲ … တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံတယ္ပဲ ထားဦးေတာ့ … ခြဲျခားတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက ခြဲျခားလာတဲ့အခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ … ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ … ရခိုင္လူမ်ိဳးဟာ ဗမာလူမ်ိဳးဟာ ကခ်င္လူမ်ိဳးဟာ ရွမ္းလူမ်ိဳးဟာ … မြန္လူမ်ိဳးဟာ .. ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဟာ ….. ဘာေတြဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုတာ .. ေဟာဒီ ေရာမသား ျပသာနာကို ဖတ္ၾကည့္ပါ ( https://www.facebook.com/notes/mg-oo-mg/%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC/313134585370190 )
Humanity အရ … ကိုယ့္ဘက္က လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားၿပီး အသားအေရာင္ လူမ်ိဳး ဘာသာ အယူအ၀ါဒ ခြဲျခားၿပီး မဆက္ဆံခ်င္ေပမယ့္လည္း ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္ဘာသာ သာသနာကိုေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ရမွာပဲ။
Posted by kyawphyo | 05/11/2011, 18:52
Wooha! Whatapost! If you or Tha Ya Phi Than or whoever said “Not all Myanmar have inhuman opinion on Bengali Immigrants”, that person needs to ask him/herself.
First, WHO do have “inhuman opinion on Bengali immigrants”? I’m against naming these Bengali immigrants as our ethnic and no one who are against with this fact assume Bengali immigrants inhumanly. We all would agree to provide food, shelter and even the citizenship rights to those who have already lived in Myanmar. What we are against is their transforming the history, cheating the reality and trying to have influence on international community.
Then, the person who wrote this must ask how rich Myanmar is to accept those so called poor homeless? Don’t give the lame excuse like “Bangladesh is also notarich country”. Myanmar has tons of problems to be solved both locally and internationally. Why should we bother to make home for them, huh?
Next, this person need to bare in mind that Human right should not only imply to so called homeless and refugees but also to innocent normal public like us whose home land is about to be robbed! If it’s the era of democracy, why you guys are so freaking afraid of our freedom of speech? There might be some people who use harsh tones and improper words when they are talking about this problem. Even if so, it’s only because of that much giant media CHEATED, LIED, IRRESPONSIBLE AND BULLIED to all of them.
Hope you guys could do the maths.
@Wa Tote or whoever think Myanmar are the people who have moved to today Myanmar from somewhere, read this to energise your brain. http://mmnetizens.wordpress.com/2011/11/01/arakanese-n-bengalis-rohingya/
Posted by Chan (@mydaydream89) | 05/11/2011, 19:19
လူ႕အခြင့္အေရးသမားေတြ ဖတ္ဖို႕. . . .
လူကိုလူလို႕ တန္းတူျမင္ဖို႕၊ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့သူေတြကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားဖို႕၊ အသားအေရာင္၊ အမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဖို႕ ဘာမဆိုသေဘာတူေထာက္ခံပါတယ္။
တသက္လံုးလည္း ဒါပဲ ေရး လာတာပါ။
ဒီ့အတြက္ပဲ လမ္းေပၚမွာ အလံုးအရင္းနဲ႕ ဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြကို ကိုယ့္အိမ္ေပၚဆြဲတင္၊ ကို္ယ့္အိမ္မွာေနလာတာၾကာေတာ့ အေမြခြဲဖို႕ႀကိဳးစားတာကို ကာကြယ္ဖို႕ လုိမလို ပဲ စဥ္းစားၾကရေအာင္။
က်ဳပ္တို႕လည္း အေမြရသင့္ပါတယ္၊ ေဟာဒီအိမ္ႀကီး႐ွင္ရဲ႕ ကိတၱိမေမြးစားသားေတြပါ လို႕ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအတုအေယာင္ေတြကို ဖန္တီး ေရးသားလုပ္ႀကံတာကို အဲဒီစာခ်ဳပ္ေတြက အတုေတြပါလို႕ေတာင္
ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုတာႀကီးက ေျပာခြင့္မ႐ွိေတာ့ဘူးလား ဟ႐ုိ႕ . . ။ ။
Posted by Sun Htun | 06/11/2011, 15:06
ေမာင္၀တုတ္တို႔ကေတာ့ အဘိုး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာမ်က္ႏွာမွ မေထာက္၊ ကုလားဆီက ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရမလားဆိုျပီး (ရျပီးျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပါ) ရိုဟင္ဂ်ာကို လူ႔အခြင့္အေရး ဗန္းျပ ကာကြယ္ေထာက္ခံေနျပန္ျပီ။ မင္းေၾကာင့္ မင္းအဘိုးရဲ႕ ရွိျပီးသား ပံုရိပ္ထိခိုက္တယ္ဆိုတာ သိထားဦး။ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ ေျပာလို႔ေကာင္းေပမယ့္ အားလံုးတေျပးညီ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ မင္း ကုလားႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ဖူးရင္ သိလိမ့္မယ္။ မင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ကုိ ေရာက္သြားရင္ သိလိမ့္မယ္။ အခုလို ေထာက္ပံ့ေၾကးနဲ႔ လန္ဒန္မွာ ေနရင္ေတာ့ သိမွာ မဟုတ္ဘူး။ စာေတြ႔နဲ႔ လက္ေတြ႔မတူဘူးကြ။
Posted by ဒ႑ာရီ | 09/11/2011, 03:23
Brave guy, Lamadaw Po Wa Tote, Hlaing Bwa is challenging you and colleagues !
Hlaing Bwa ဟုတ္ပါျပီ… ကြ်န္ေတာ့္ကုိလည္း ….. Send Message ကေန သည္ကိစၥကုိ ေလးေလးနက္နက္ ရွင္းဖုိ ့ဆုိျပီး ျပည္တြင္း (ျပည္တြင္းက Messages) ေတြ (၂၇) ခု ရပါတယ္ (ကြ်န္ေတာ့္ကုိပုိ ့ထားပါတယ္) သုံးခုက ကြ်န္ေတာ့္ကုိဆဲထားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အမည္ခံ/အမည္ရ ေတြပါ။ (အဲသည္ဆဲတဲ့ – အမည္ ဓါတ္ပုံမေဖၚရဲတဲ့ သူေတြကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ ဘယ္လိုမွ မေအာက္ေမ့ပါဘူး … ကီးေဘာ့အလုပ္ … လုပ္သေလာက္ ကြ်န္ေတာ့္ကုိဆဲလုိ ့ရပါတယ္)။ … သည္လုိလုပ္ဗ်ာ… ခင္ဗ်ား … ခင္ဗ်ားဆုိတာက … အဲသည္ … ဘုိ Bo အပါအ၀င္ … နာမည္ၾကီး ေခတ္သစ္ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း (RFA အသံလႊင့္သူရဲေကာင္း) အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လက္ရွိ/ လက္မဲ့ /မ်ဳိးဆက္ရွိ/ မ်ဳိးဆက္မဲ့/ ယုံၾကည္သူ / ဇေ၀ဇ၀ါ ……. အားလုံးနဲ့ကြ်န္ေတာ္ ျကုိက္တဲ့ မီဒီယာ (အသံထြက္ / အသံမထြက္ – ရုပ္ျမင္ ရုပ္မျမင္ / ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္/ တြီတာ) လူအမ်ား – ၾကား/ ျမင္ /သိ … တဲ့ေနရာကေန ျမန္မာလူမ်ဳိး မိေကာင္းဖခင္ သားသမီးပီပီ ပညာတတ္ပီပီ (ပညာမတတ္လည္းရတယ္) ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမူထုံးစံ အသုံးႏွဳန္း ထဲကေန ျမန္မာ့အဆင့္အတန္းရွိရွိ … Debate လုပ္မယ္… ဆုိတာကုိ လွဳိင္ဘြား (အျကြင္းမဲ့) သေဘာတူပါတယ္။ အမ်ားသိႏုိင္တဲ့ Media ေနရာကုိေခၚပါ … လွဳိင္ဘြား အဆင္သင့္ပဲ…. တခုပဲဗ် – ကြ်န္ေတာ္တုိ့အဲသည္လုိ Debate လုပ္မူကုိ ျမန္မာလုိ အဂၤလိပ္လုိ ျကုိက္သလုိလုပ္ပါ ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က အဆင္သင့္ပါ (အဂၤလိပ္လုိလုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ Dialectical materialism ကုိအလြတ္က်က္ ထားရုံနဲ ့မုလုံေလာက္ဖူးဆုိတာေတာ့ျကုိေျပာထားလုိက္မယ္) … လွဳိင္ဘြားအဆင္သင့္ပဲ ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္းနဲ ့အေပါင္းအပါေတြေရ့ – … အခ်ိန္မေရြးပါ (Handicap ေပးခ်င္တာတခုက လွဳိင္ဘြား ဆုိတာ အမ်ဳးသားေရး၀ါဒီ ဗုဒၵဘာသာကုိ သိပၸံနည္းက်ယုံၾကည္သူ – အဲဒါပဲ I’m ready to meet you in any time in public place – လွဳိင္ဘြား/၈၈
Saturday at 14:12 · Like · 37
Posted by Set Htun | 15/11/2011, 00:55
Presently, I’m staying in Chittagong.
Most of Bangladeshi (all are engineers) told me about that.
They said thataRohinger is notaBangladeshi. They are come from border area of Myanmar and Bangladesh.
The authority of Bangladesh accepted them to put in Cox’s bazar because their country is in progress withaDemocracy.
But most Bangladeshi don’t want to accept the Rohinger.
Also he asked me which country is better your or our.
Your country is poor than me. Isn’t right.
How can the Bangladeshi go to your poor country.
Many Myanmar had been come to Chittagong for some jobs.
If you don’t believe that I’ll bring you the little Myanmar quarter in Chittagong.
He also said that the Immigration authority of Bangladesh are corruption peoples. They will easily issued Bangladeshi ID if you bribe them.
I don’t want to argue them.
Posted by BINO | 20/11/2011, 14:41
Bravo ko Watote, You display Ko Hlaing Bwa’s challenge that was posted in here and BBLS blog.
Your truly inherited with brave blood of Bo Kyaw Zaw.
A powerful engine needs good taming.
Posted by Set Htun | 26/11/2011, 12:56
မြန်မာပြည်မှာ ဘုန်းကြီးများကို ပေါ်တင်ပိုက်ဆံ လှူတန်းနေကြသည်မှာ သာသနာဖျက်တာလား။ လမ်းမှားရောက်ကြတာလား။
Posted by Myo | 31/12/2011, 05:16
LeaveaReply to Set Htun Cancel reply